MUUQAAL: Ololaha Xilka Raysal wasaaraha iyo Muqdisho, Cali Xaraare oo Xog soo bandhigay | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
MUUQAAL: Ololaha Xilka Raysal wasaaraha iyo Muqdisho, Cali Xaraare oo Xog soo bandhigay
Jul 30, 2020 - 22 Aragtiyood
Muqdisho ( Kalshaale ) Magaalada Muqdisho ee Caasimadda dalka waxaa siwayn looga dareemayaa loolanka loogu Jiro Qabashada Xilka Raysal wasaaraha Soomaaliya, kadib markii uu meesha ka baxay Xasan Cali Khayre oo Baarlamaanku Kalsoonida kala noqday.
Waxaanu Halkan idiinku soo gudbinaynaa Warbixin uu Cali Xaraare ku eegayo Wararkii ugu dambeeyay Arintaasi iyo Shaqsiyaadka loolanka ugu jira Xilkaasi.
Sidoo kale Musharixiinta doonaya Xilka Raysal wasaaraha kamid ah Siyaasiyiin Mucaarid xoogan ku ahaa Madaxwaynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Ololahan ayaa mararka qarkood gaadhsiisan heer maamulo, waxaana ku herdamaya Galmudug oo inteedi badneyd Muqdisho joogaan waxaana hoggaaminaya Axmed Cabdi kaariye Qoor, Gobolka Banaadir oo ay kala hoggaaminayaan siyaasiyiin kala duwan oo isugu jira Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Cumar Filish iyo siyaaasiyiin hore oo ay kamid yihiin Madaxweynayaashii hore ee dalka.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa la sheegay inuu diyaar la yahay in ay meel mariyaan cidkasta oo la keeno shardigooda u horeeyaana yahay in la xaqiijiyo muddo kordhin laba sano ah.
Horta labo sano kordhin waa sharci daro hadii ay dhacdana waa wado furantay soomaaliyana meesha laga haysto waa baarlamaanka
madaxtooyada xafiiska madaxeyne farmaajo wuu buux dhaafay meel lakala istaago ma jirto waxaa buux dhaafiyey salaadiintii ,xildhibaanadii,siyaasiyiintii,ganacsatadii iyo waxgaradkii beesha hawiye oo u suxul duubaya helitaanka R/wasaaraha cusub waxaana igu maqaalaa in gurguurte iyo shariff ay soo gudbiyeen CV da si ay u helaas jagada r/wasaaraha cusub,waxaase cajiiba in loolanka ugu adag uu dhexmarayo H/gidir iyo Abgaal bal aan aragno cida ku guuleysata jagadaas
Boowe aa kula tahay
Goobta kaliya ee “NOW HIRING ” MOGADISHU
kutaal waa villa Somalia ..
Fahad Yasiin wuxuu rabaa nin marka hore
1. Ethiopia jecel
2. Al-seefle jecel
Hadduu helo nin labadaas isku darsadey waa xaqiiq inuu Suulka ka saari Mr Farmaajo.
Inta ka horeyso waa Shaah iyo sheeko.
Sideena miyaad ogoshihiin in 3 min oo Hawiye idiin maamulaan, dowladda, dhaqaalaha iyo Bankiga EE DOWLADDA SOMALILAND.
Rasalwasaare Mahdi Guuleed
Wasiirka Maaliyadda Bayle
Guddoomiyaha Bank dhexe
Ayaa ka wada shirey Dhaqaalaha iyo lacagta Bank dhexe taalo ee Maamulka Banaadir state.
ninyaw bal waran waxaa iigu kaa dambeysey allgalgauud,waa mr samatarki cagdheer ,adna saw maadan ahayn reer wardheere
ani waxaan odhanlahaa ,earmaajo nimankii idinsoo hooyey ee kismaayo idin qabtay ,magacaw waa ceyr ,aka yabardhawr kacay reer buraale
Ceyr lacag ayuu yeeshay, dagaalkii wuu diidey.
Anaguna waxaan laheyn Kismaayo ku afuufa,
Ceyr hadduu dagaal diido Kismaayo waa ku deysay.
Sidii reer Bari, ayey guursadeen gabdhihii BOQORADA Suula South Africa.
– Sanweynaa oo sararo Weynaa Allow DENI iyo GALAAN – AFARTA CAROOLE AXMED KA YEEL.
Waxaan maqley In MAYOR GODEY yahey CAROOLE AHMED.
Ogaadeen Kismaayo RIMAN, CEYRna GODEY Riman
HALA ISKA DABO-MEEREYSO.
haa asal ahaan habar aji ,cabdule hasan ,lakiin waa cagdheer cabdale ,ah
deni horta ma suruur baa ,qeyb badan oo cusmaan maxamuud ah ayaa suruur ah ,xaga sanka kkkkkkkkkkkkkkkkkk alla maxaa makane isqarinayaa
Alla maxaa MAKANE isqarinaaya.
Miyaadan maqlin nin Ceyr ah oo lagu darey BOQORTOOYADA SUULU SOUTH AFRICA
Caruurta ay dhasho naagtas waxey 100 sano kadib sheegan BOQOR GURICEEL CEYR.
Hadda adigoo Alle ka cabsan keeba MAKANE u eg DR DALXA IYO BEEL-DAAQE BURHAAN.
Waa wiilashii Boqortooyo Zanzibar
Sida Ninka CEYR ee hadda noqdey BOQORTOOYO Suula
mucaaradkii iyo muxaafidkii kuligod ma waxay galen
Safkii villa somalia ….. xawaadle iyo gugundhawe
Mid un haloo dhiibo masayrka dhex yaal hiraab
Masiibuu noqon karyaa
Ninbaa igu dhahey haddaad tagto QARDHO waxaad moode inaad joogto WEBIGA JIINKIISA JAMAAME
Kadib waxaa soo baxey TV sawir maqariye, ayagoo u safan Xassan Shiikh ayaan ahey,
Saa waaba Caruurti CALI CAMBUURE FUUNDI
Hadde Qaxootigii CADEN YEMEN waan ku arkey 1992, Boowe sagoo leh YAA HUU
Xow aheey Jareerka afka kakan
Hiraab iyo Idil Farmaajo sidey u caraadin hayeen Madaxweynahii aan dooraney
Maanta Allaa qadarey inuu la kulmo Madaxdii Galmudug iyo HIRSHABEELE 4 SANO KADIB.
ileen Kheyre carada ma jooge.
Jaceyl wuxuu dhahey Allaa ileh ee intaan ka badan kuma hoos jirikaro sariirtaan.
Ma jiro qof diidaya qabashada xilka raisul wasaare waayo waxa uu ugu yaraan kabayaa cv-ga qofkaas oo xataa Farmaajo ayaa nagu waabsaday 6 bilood baan ahaa prime minister.
Laakiin su’aasha meesha taal ayaa ah sidee qofkaas isaga caabin karaa mucaaradada iyo niyad jabka ku xeendaaban kursiga uu qabanayo iyo sidee ula jaan qaadi doonaa xaaladaha isku soo aaday ee dhibka badan.
Tan ugu daran waa qaabka uu ku xulanayo madaxweynaha oo ah maxaa ii qaban kartaa ee maaha maxaa dalka u qaban kartaa….
Sida muuqata weli lama helin dhiman dhiman.
Anigu waxaan halkaa u deyn lahaa. Mr guleed ilma amxaaro.
Berya kadibna saxaafadda ayaan iskugu yeeri lahaa. Oon dhihi lahaa.
Waxaan ahay madaxweynihii ugu fiicnaa marka laga reebo adeerkeey siyaad Barre.
Waxaan balan qaaday in aan dalka gaarsiin doono doorasho qof cod ah.
Waxaan balan qaaday in aan dhisaayo maxkamadii sare.
Waxaan balan qaaday in aan dhisaayo ciidan heer federaal ah oo la wareego xuduudaha dalka.
Waxaan balan qaaday in aan mideyn doon canshuuraha wadanka.
Waxaan balan qaaday in aan amisom dalka kasaraayo.
Waxaan balan qaaday in aan xiri doonin wadooyinka caasimadda.
Waxaan balan qaaday wadahaladii somaliya iyo domaliland in aan halmoodii kasii wadi.
Waxaan balan qaaday in aan noqon doono nabadoon somaliyeed.
Waxaan balan qaaday in aanan raisulwasaraha aan keeno aanan isqaban doonin.
Intaas aan balan qaaday waxba kama qaban.
Waan jeclaa in aan qabto laakiin duruufo iyo caqabado kursiga xeeran iyo waqtigii oo iga dhacay darteed kama gaaro.
Waxaa ii muuqato in la joogo waqtigii aan kursiga baneyn lahaa.
Waxaan go.aansaday in dadka kale fursadsiiyo.
Ma ihi musharax xilka u tartamaayo.
Waan ka hor leexanayaa umadda somaliyeed.
Waa dhaaftay intii aan aqaanay. Talo mahaayo.
Fadlan igala sheqeeya sideey doorasho heshiis lagu yahay dalka uga dhici laheyd.
Waxaan shacabka somaliyeed waydiisanayaa in ay i cafiyaan.
Masaajidka ku yaala Somaliya,bal ka waran xaalkiisa.
Marka la tukanayo kaba waa la ilaashadaa.Waa lagaa xadayaa.
Masaajiska ku yaala Yurub,kabaha dibada ayaad dhigan kartaa hadaad rabto.Cidi kaa xadimayso.
Ummad laga ilaashaanayo kabo masaajid yaala,maxay doorasho iska yaqaanaan?
Mr. BaHaL, aqponyahn salaam kabacdi.
Yaad u maleeyn in uu Somalida sidaas aad ku timaantay ee masaajidka kabaha laga xadayyo ka dhigay?
In my humble opinion, fikirkeeyga waxuu yahay in uu daanyeer Afweeyne ka dhigay, una qaabeeyay Somalida sidaas iyo social engineering maadaama uu ahaa hogaamiyahii ugu waqtiga dheeraa ee Somalia xor markii eey noqotay hogaaminayay. Hooyadiis wasse Afweeybe, daanyeernimadiisa iyo badownimadda cawaanta Ilkayarta u badan yahiin ayaa ka dhigay Somaliya wadan gaajo darteed kabaha la’iskago xaddo masaajidyadda. Meesha eey Somaliya ka noqon kartay wadan soo saara saliid ka badan amaba u dhiganta tan eey wadamadda khaliijka soo saaraan, oo Somalia eey noqon laheeyd dal taajir ah.
Laakiin ilkayar cawaan ah oo sidda Farmaajo maantay oo 2020 ah ugu doodayo wasaqnimadda iyo beenta ah doorasho qof iyo cod ayaan qaban maxaa lags fillan karray reer baadiye Afweeyne?
Sidii Afweeyne oo kale ayuu daanyeerkaan Farmaajo rabaa in uu Somaliya lug gooyo, baabi’yo, galiyo qalalaase amni iyo siyaasad. Waana in aanan laga yeelin daanyeer Farmaajo in uu Somaliya u lug gooyo sidda adeerkiis Afweeyne u lug gooyay Somalia. Daanyeero.
waan kaa qaaday salaanta,anna waan ku sslaamay sidaa si la mid ah.
Umalayn maayo inuu Jaale Siyaad Ummada Somaliyeed Tuug ka dhigay,laakiin waa ummad sidaa u qaabaysan oo asal ahaan Tuug ah.Somaliya nin aan Tuuga ahayni kuma noolaankaro.
“Nin aan warankaagu galin,weedhaadu ma gasho”.Hadalkaasi ayaa inuu sharaxaya sida somaliya uu xoogu uga shaqeeyo.
Ogow,marka aad ku celceliso,kuwaasi,kuwaasi,kuwaasi,wxaad jidaysay in lagu yidhaa,kaasi,kaasi,kaasi waa Reer Hebel.
Hadaad tidhaa,kuwaasi Ilkayarta ah,adna waxaa lagu odhan,kuwaasi Mooryaanta.Magac laguu waayi maayo.
Anuu waxaa odhanlahaa,somalida hoosta ha laga soo dhiso,si kuwa dhalanaya iyo kuwa korayaa u noqdaan Bulsho fiican.
Wax doorasho la yidhaa kkkk
Tuug wax kala iibsanaya,lama yidhaa doorasho.
War dulliyahaw uraya ee daciifkaa ee uskagaa iska dhaaf meytida dhimatay wax akhlaaq iyo aadaab daran baa tahaye tarbiyad ma lihid dulli yahay nijaaskaa qufna looserkaas homeless ka ah ee cadaado ee Bilaa diintaa Bilaa asluubtaa baa tahay qabiilna saleebaan qaawan oo cawaan ah oo seyn leh baa tahay war adigii saleebaan ah oo jaahil ah oo foolxun oo mooryaan ah baa cid wax ka sheegeysaa yaad is mooday dameer yahaw wallee waa aduunyi gadoon ama saban aakhir hadii saleebaan hadlayo cajiib war dhuumo oo dhidhibso ina gumeed yahaw.
Mr. BaHaL, waan kula socda bro
Baaraan, guskeeyga ka fuq bitch yaheey, lols. Meeyto meeyto waligaa dhah, daanyeer Siyaad Barre waa la xusuusin eeynimadda iyo daanyeernimadda uu sameeyay dadka Somaliyeedna barray. Daanyeer.